Mutemo wekushanduka kwemamiriro ekunze wakanyorwa sei pamusika wemari? | Ehupfumi Zvemari
Imwe yemaitiro anofungidzirwa kuburikidza nemutemo wekushanduka kwemamiriro ekunze kurambidzwa kwekutengeswa kwedhiziri, peturu nemotokari dzakauchikwa muna 2040. Ichi chikumbiro chehurumende chakabatanidzwa mugwaro rinoshanda remutemo uyu kugadzirisa nharaunda. zvakarongwa kuderedza CO20 emissions ne2% na2030 uye kuti kanokwana 70% yemagetsi inogadziriswazve. Mumwe wemhedzisiro mukushandisa kwayo uchave nekusimudzirwa kwemota yemagetsi kukuvadza simba rezvechivanhu.
"Kubva pagore ra2040, kunyoreswa uye kutengeswa kwemotokari dzinofamba nevanhu uye dzakareruka mota dzekutengesa dzakaburitsa kabhoni dhayokisaidhi hazvizobvumidzwe kuSpain," maererano neruzivo rwakapihwa nebazi reEcological Transition. Kusvika padanho rekuti rimwe remazano ekuremekedza nevakuru aripo mukusimudzira zvishoma nezvishoma kuiswa kwe3.000 MW yemagetsi pagore pakati pa2020 na2030. hurongwa hwemagetsi hutano kwenguva refu.
Chero zvazvingaitika, chirongwa cheaya maitiro chinosanganisira akateedzana e mhedzisiro yakanangana pamisika yemari. Iko pasina pasina kupokana kune vamwe vanobatsirwa uye vamwe vanokundikana pamatanho akadaro uye iwe aunogona kutora mukana paunotora chinzvimbo mumisika yemari. Nekudaro, iwe hauzo cherechedze mhedzisiro yaro munguva ipfupi zvirinani musimba rayo rese. Iwo mativi ane chekuita nesimba, magetsi uye kunyanya mafuta ndiwo achanyanya kukanganiswa nezviyero zvambotaurwa.
1 Mutemo wekuchinja kwemamiriro ekunze
2 Izvi zvinokanganisa mutengo wemakambani emafuta
3 Magetsi bhizinesi achawedzera
4 Munguva yepakati nepakati
6 Zviridzwa zvemari
Mutemo wekuchinja kwemamiriro ekunze
Ehezve, aya haazi mashoko akanaka kumakambani akabatana neiyo simba chikamu cheiyo petroleum. Hazvishamisi kuti vatengi vanozove nekutsamira kushoma pane iyi yemari midziyo yekutora mota yavo nekuti zvinoedzwa nemutemo uyu kukurudzira kukurudzira kushandiswa kwemotokari yemagetsi pamusoro pezvimwe zvakanyanya kufunga. Muchokwadi, imwe yenyaya dzakakodzera kwazvo gore idzva ratichangotanga kubata nderekuti Volvo anogadzira mota akazivisa kuti kubva 2019 ichatengesa chete mota dzemagetsi. Uku ndiko kuchinja kwechimbichimbi mumutsara webhizimusi, zviine miganho yakafara mumisika yezvemari.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti mumwe wemakuru ari muchikamu, seToyota, akazivisa mwedzi mishoma yapfuura kuti ichamira tengesa mota dzedhiziri muEurope. Ichi chinhu chinotungamira mukuwedzera mukutengesa kwemotokari dzemagetsi kubva zvino zvichienda mberi. Kunyangwe ichiripo kuti igadziriswe pasi pechisimba chichaitwa mumwedzi iri kuuya kana kunyange makore. Mupfungwa iyi, makambani akasiyanasiyana emagetsi ari kufambisa basa nekugadzira akasiyana nzvimbo dzekuchajisa dzekirasi ino yemotokari isingasvibise nharaunda.
Izvi zvinokanganisa mutengo wemakambani emafuta
Mhedzisiro yekutanga yekushandisa kweiyo ley yeshanduko yemamiriro ekunze ndeyekuti purofiti mumakambani emafuta iri pasi pezvino. Izvi zvinotakura kusvika padanho rakakura kana shoma sezvo kukoshesa kwemitengo yavo kuri kugadziriswa zvichibva pakuchekwa kunoonekwa neiyi yakakosha mari yemari. Mumisika yemunyika yezvemari yemari inoshanduka-shanduka, mukuru akabatwa neichi chiyero chazvino ichave iri kambani yemafuta Repsol izvo zvichakwanisa kudzikisa mwero wemitengo yayo munguva pfupi nepakati. Kana panguva ino mutengo wayo uri munzvimbo yakatambanuka inofamba pakati pegumi nematanhatu negumi nematanhatu mugove. Asi nekudzikisa mashandisiro ayo, zvine musoro, mabhenefiti ayo aigona kudzikira zvakanyanya, kunyangwe kuve pamatanho ari pasi pazvakatarwa panguva ino.
Chiri kuomarara ndiyo mamiriro zvine chekuita nemisika dzenyika dzese uko kuvapo kwemafuta makuru emarudzi mazhinji ari kushanda. Asi ivo vanogona kupomera iyi yakaoma kurohwa kune iyo chikamu pamwe nekugadzirisa mumitengo yavo. Kubva pane ino mamiriro ese, chiyero chakangwara kune vashoma nevepakati varimi chinosanganisira kusatora chinzvimbo mune ino chikamu. Kune vamwe vane zvirinani kukura tarisiro uye kunyangwe hazvo iwo mutengo wemafuta asina kuchena uri pane imwe yematanho epamusoro mumakore apfuura. Iko mutengo wehomwe uri padhuze kusvika makumi masere emadhora dhiramu.
Magetsi bhizinesi achawedzera
Pane zvinopesana, mumwe wevakabatsirwa zvikuru pachiyero ichi makambani ari muchikamu chemagetsi anozoona kugadzirwa kwavo kuchiwedzera kubva zvino zvichienda mberi. Kunyanya mumatemu anotungamirwa kune epakati uye akareba uye izvo zvinofanirwa kuratidzwa mu mutengo mutengo. Izvi zvirinani mune dzidziso nekuti ichi chinhu chinoenderana nemamwe misiyano yakakosha kwazvo mukuenderana kwayo. Mupfungwa iyi, hazvigone kukanganwika kuti kuiswa kweashoma emamegawati mazana matatu (MW) emagetsi pagore munzvimbo dzekugadzira magetsi kuchasimudzirwa.
MuSpain, makambani iyo inokwana zvakakwana chiyero ichi pakudzivirirwa kwezvakatipoteredza Endesa, Iberdrola uye yaimbova Gasi Natural. Parizvino, uye kunyangwe paine yakanaka nguva iyo equity iri kupfuura, ivo havasi kuunza iyi mutsauko mumabhizinesi avo mamodheru. Kunyangwe vese vari munzvimbo dzakakwirira dzemitengo yavo uye vamwe vakaita saRed Eléctrica Española vakatozviisa munzvimbo yekusununguka yemahara mumavhiki apfuura. Imwe yemabhenefiti evadiki vepakati nepakati kubva pakutenga zvazvino kuri kuzvimisikidza nekujeka kwakakosha pabepa nekutengesa.
Munguva yepakati nepakati
Chero zvazvingaitika, matanho ehurumende aya anofanirwa kushambadzira nzira yekutenga mukati memakore mashoma. Nekudyara kupi mumakambani emagetsi kunogona kubatsira zvakanyanya pane aya mamiriro ekugara. Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti vanogovera a chikamu pakati pevashandi vayo ane rupo kwazvo. Iine yakamisikidzwa uye yakavimbiswa purofiti iyo iri pakati pe5% uye 7%, zvichienderana nekambani yakanyorwa. Kugadzira yakatemwa mari mukati meiyo kusiana, zvisinei nezvinoitika mumisika yemari. Chinhu chinobatsira kwazvo munguva dzekusasimba kukuru mumisika yemari yemari.
Nenzira iyi, imwe yedzimwe nzira dzekuita kuti mari ichengetwe kubva ikozvino inomiririrwa nemakambani emagetsi, ayo zvakare ane bhizimusi modhi yagara yakagadzikana. Kusvika pakuonekwa se pokugara kukosha nguva dzekusagadzikana kukuru uye kusagadzikana mumisika yemasheya. Unogona kuvaka rako rinotevera rekudyara portfolio nemamwe emasheya aya kuti uwane kudzoka, asi kwete munguva pfupi. Nenjodzi shoma mukufumurwa kwakagadzirwa kubva pamatanho matsva nehurumende yenyika.
Semhedzisiro yeichi chiitiko chinosanganisira kuitiswa kweiyo ley yekushanduka kwemamiriro ekunze kurambidzwa kutengeswa kwedhiziri, peturu uye mota dzakauchikwa muna 2040, hapazove nesarudzo asi kusiyanisa nzira dzekudyara. Kutsiva makambani akasunganidzwa nemafuta asina kubikwa nemakambani emagetsi uye nekunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye kunyangwe kubva pane yakakosha maonero. Nechinangwa chekuti mumakore mashoma iwe unogona wedzera mari iyo iwe yawakaisa mari mumusika wemasheya kubva ikozvino zvichienda mberi. Hazvishamisi kuti ichi chinofanirwa kuve chinangwa chako chikuru kubva panguva dzino chaidzo.
Chimwe chinangwa muzvitoro zvako chinofanirwa kunongedzwa kune kubvisa chero mhando dzenjodzi mukuita kwako pamusika wemasheya uye mupfungwa iyi hapana chinhu chiri nani pane kubva kumakambani emafuta. Kunyanya mukufamba kunoitirwa mazwi akareba. Ivo vanogona kutsiviwa necheni yemagetsi iyo inogona kubatsirwa kubva kune ino nyowani nharaunda mune nharaunda. Kune rimwe divi, zvinofanirwawo kutariswa kuti hurumende iripo inoda kugadzirisa, padanho rakasarudzika, zvakanangana nekurongwa kwenzvimbo yekutengesa magetsi. Ichi chichava kukurudzira kutsva kune zvido zvemakambani emagetsi.
Nepo kune rimwe divi, chikamu chikuru chemakambani emagetsi chisina kutora mamiriro aya, hazvireve kuti havazozviita mumakore anotevera. Kunyangwe kusahadzika kukuru kuripo kuti zvichaitwa riini kuti umiswe uye unganidza kuwedzera kwemutengo yezviito. Nechikamu chayo, General State Administration inonongedza kuti "haizoite mari nyowani mumasheya kana zviridzwa zvemari zvine chiitiko chinosanganisira kubiridzira, kubvisa, kugadzirisa kana kugadzirisa mafuta epasi."
Kwete zvisina maturo, chikamu chakakura chevatengesi chinotarisira ndechekuti matanho aya anovabatsira kufambisa mari yavo nenzira inoshanda uye zvinoenderana nezvavanofarira. Izvo zviri kumagumo ezuva chii icho chiri nezve ino nguva yekuvandudza zvinzvimbo zvavo muzvikamu mukati meyakafanira nguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Mutemo wekushanduka kwemamiriro ekunze wakanyorwa sei pamusika wemasheya?